Subnet Mask - Explained - NE - Stindx.com
Number of symbols: 11784
सबनेट मास्क के हो? तेसैले यो भिडियो को एक बिषय हो। अब हामी एक सबनेट मास्क के बारे मा कुरा गर्नु भन्दा पहिले हामी पहिले एक आईपी ठेगाना के हो भन्ने बारे मा कुरा गर्नु पर्छ। एक आईपी ठेगाना एक कम्प्यूटर वा नेटवर्क मा उपकरण को लागी एक पहिचानकर्ता हो । प्रत्येक उपकरण संचार उद्देश्य को लागी एक आईपी ठेगाना छ। र विशिष्ट हुन को लागी, म एक IPv4 ठेगाना को बारे मा कुरा गर्दैछु। एक IPv4 ठेगाना एक 32-बिट संख्यात्मक ठेगाना हो, चार संख्या को रूप मा लिखित, अवधि द्वारा विभाजित। संख्याहरु को प्रत्येक समूह जो अवधि द्वारा अलग गरीएको छ एक अष्टक भनिन्छ। प्रत्येक अक्टेट मा संख्या दायरा0- 255 बाट छ। एक आईपी ठेगाना दुई भागहरु हुन्छन्। पहिलो भाग नेटवर्क ठेगाना हो र दोस्रो भाग होस्ट ठेगाना हो। सञ्जाल ठेगाना वा सञ्जाल आईडी एउटा नम्बर हो जुन सञ्जाललाई तोकिएको छ। तेसैले हरेक नेटवर्क एक अद्वितीय ठेगाना हुनेछ। होस्ट ठेगाना वा होस्ट आईडी के हो कि
कम्प्यूटर, सर्भर, ट्याब्लेट, राउटर, र यति मा कि नेटवर्क को भित्र होस्ट को लागी तोकिएको छ। तेसैले प्रत्येक होस्ट एक अद्वितीय होस्ट ठेगाना हुनेछ । अब आईपी ठेगाना को कुन भाग नेटवर्क वा होस्ट हो भन्न को लागी तरीका हो , जहाँ सबनेट मास्क आउँछ। एक सबनेट मास्क एक आईपी ठेगाना जस्तै एक संख्या हो । र यो प्रकट गर्दछ कि आईपी ठेगाना को नेटवर्क भाग मास्किंग को लागी आईपी ठेगाना मा कति बिट्स नेटवर्क को लागी प्रयोग गरीन्छ । अब कम्प्यूटर र नेटवर्क को दुनिया मा, आईपी ठेगाना र सबनेट मास्क यो दशमलव ढाँचा मा यहाँ अर्थहीन छन्। र यो हो किनभने कम्प्युटर र नेटवर्कहरु उनीहरुलाई यो ढाँचा मा पढ्दैनन् र यसको कारण यो हो कि उनीहरु मात्र एक बाइनरी ढाँचा मा संख्याहरु बुझ्छन् , जुन १s र ०s हो। र यी बिट्स भनिन्छ। तेसैले यो आईपी ठेगाना को लागी बाइनरी नम्बर यो नम्बर यहाँ छ। र यो सबनेट मास्क को लागी बाइनरी नम्बर यो नम्बर हो। र यी संख्याहरु छन् कि कम्प्यूटर र नेटवर्क मात्र बुझ्छन्। त्यसोभए अर्को प्रश्न हो,
हामी कसरी यी बाइनरी नम्बरहरु यो आईपी ठेगाना र यो सबनेट मास्क बाट प्राप्त गर्छौं? त्यसैले यहाँ हामी एक 8 बिट octet चार्ट छ। प्रत्येक अष्टक मा बिट्स एक संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व गरीन्छ। तेसैले दायाँ बाट शुरू , पहिलो बिट १ को मान छ र त्यसपछि संख्या प्रत्येक चरण संग दोगुना हुन्छ। त्यसोभए त्यहाँ २ तब ४, 8, र यस्तै गरी, १२ 128 सम्म सबै तरीका हो। अक्टेट मा प्रत्येक बिट या त १ वा ० हुन सक्छ। यदि संख्या १ हो भने त्यो संख्या गणना गर्दछ। यदि स a्ख्या ० हो भने यो प्रतिनिधित्व गर्ने स does्ख्या गणना गर्दैन। अक्टेट मा १ र ० को हेरफेर गरेर तपाइँ ०-२५५ बाट एक संख्या दायरा संग आउन सक्नुहुन्छ । त्यसोभए उदाहरण को लागी, यो आईपी ठेगाना मा पहिलो अक्टेट १ 192 २ छ। त्यसोभए हामी १? २ बाट बाइनरी नम्बर कसरी प्राप्त गर्ने? पहिले तपाइँ अक्टेट चार्ट मा हेर्नुहोस् र त्यसपछि तपाइँ संख्याहरु को लागी १ 192 २ को कुल मा जोड्ने गरी राख्नुहुनेछ। तेसैले तपाइँ १ sl वटा स्लॉट मा १ र त्यसपछि 1४
स्लट मा १ राख्नुहुनेछ । त्यसोभए अब यदि हामी सबै संख्याहरु को गणना गर्छौं कि हामी उनीहरु को तल १s छ, तपाइँ १ 192 २ को कुल पाउनुहुनेछ। अन्य बिट्स को सबै ०s हुनेछन् किनकि हामी उनीहरुलाई गणना गर्न को लागी आवश्यक छैन किनकि हामी पहिले नै हाम्रो नम्बर छ। तेसैले यो नम्बर यहाँ १ 192 २ को बाइनरी बिट संस्करण हो। त्यसोभए अर्को अक्टेट १ 16 हो। त्यसो भए १, १,, ३२, र under अन्तर्गत १ राखौं। त्यसोभए यदि हामी ती सबै संख्याहरु जोड्छौं कि हामीहरु को तल १s छन् हामी १ 16 को कुल पाउँछौं। अर्को अक्टेट १ छ। त्यसोभए हामी १ स्लट मा १ राख्छौं र जब तपाइँ मात्र १ जोड्नुहुन्छ तपाइँ १ पाउनुहुनेछ। र अन्तिम अक्टेट0हो, जसले चीजहरुलाई सरल बनाउँछ किनकि सबै बाइनरी संख्याहरु सबै 0s हुनेछन्। त्यसैले यहाँ हाम्रो आईपी ठेगाना को लागी बाइनरी नम्बर हो। अब सबनेट मास्क बाइनरी रूपान्तरण बिल्कुल उस्तै तरीका हो। तेसैले यो सबनेट
मास्क मा पहिलो ३ अक्टेट्स २५५ छन्। त्यसोभए यदि हामी यो सबनेट मास्क बाइनरी रूप मा हेर्ने हो भने, पहिलो ३ ओक्टेटहरु सबै १s हुनेछन् किनकि जब तपाइँ एक ओक्टेट मा सबै संख्याहरु लाई गणना गर्नुहुन्छ यो २५५ बराबर हुनेछ। र त्यसपछि अन्तिम अक्टेट सबै 0s हुनेछ। तेसैले यहाँ हामी हाम्रो आईपी ठेगाना र बाइनरी रूप मा सबनेट मास्क सँगै लाइन मा लाइन छ। तेसैले यो आईपी ठेगाना को कुन भाग नेटवर्क भाग हो भन्न को लागी तरीका हो, जब सबनेट मास्क बाइनरी अंक एक १ हो यो आईपी ठेगाना को स्थिति संकेत गर्दछ कि नेटवर्क परिभाषित गर्दछ। त्यसोभए हामी आईपी ​​ठेगाना मा सबै अंकहरु लाई पार गर्नेछौं कि सबनेट मास्क मा १s संग लाइन। र जब तपाइँ यो गर्नुहुन्छ यो प्रकट गर्दछ कि आईपी ठेगाना को पहिलो3ओक्टेट्स नेटवर्क भाग हो र बाँकी होस्ट भाग हो। तेसैले सबनेट मास्क मा १s नेटवर्क ठेगाना संकेत गर्दछ र ०s होस्ट ठेगाना संकेत गर्दछ। तेसैले अर्को उदाहरण मा एक फरक आईपी ठेगाना र सबनेट मास्क
को उपयोग गरौं र उनीहरुलाई बाइनरी रूप मा राखौं। तेसैले यो उदाहरण मा पहिलो २ अष्टकहरु २५५ र अन्तिम २ अष्टकहरु ० हुन्। त्यसैले यदि हामी आईपी ​​ठेगाना मा सबै अंकहरु लाई पार गर्छौं कि सबनेट मास्क मा १s संग लाइन, हामी देख्छौं कि पहिलो २ अष्टक नेटवर्क भाग हो र अन्तिम २ अक्टेट्स होस्ट भाग हो। र एक अर्को गरौं, र यो सबनेट मास्क मा पहिलो अक्टेट २५५ हो र बाँकी ० हो। र तब हामी फेरी सबै अंक पार गर्नेछौं, र यो समय यो प्रकट गर्दछ कि पहिलो अक्टेट नेटवर्क भाग र अन्तिम हो3अक्टेट्स होस्ट को लागी हो। अब यी पूर्वनिर्धारित सबनेट मास्क को उपयोग गरी एक आईपी ठेगाना को नेटवर्क र होस्ट भागहरु बाहिर figuring सरल थियो। किनकि मैले पहिले भनें, जब तपाइँ एक अक्टेट मा सबै संख्याहरु लाई गणना गर्नुहुन्छ यो 255 बराबर हुनेछ। त्यसोभए हामी स्वचालित रूप बाट जान्दछौं कि अक्टेट मा संख्याहरु सबै 1s हुन्, त्यसैले हामी वास्तव मा आईपी ठेगाना वा सबनेट मास्क मा देख्नु पर्दैन।
यसको बाइनरी ढाँचा किनभने यो धेरै सरल छ। तर के हुन्छ यदि सबनेट मास्क यो नम्बर यहाँ थियो जहाँ पहिलो दुई अक्टेट 255 हो तर तेस्रो अक्टेट 224 हो? त्यसैले यो एक सानो trickier छ। तेसैले यहाँ यो सबनेट मास्क को लागी बाइनरी नम्बर हो। पहिलो दुई अष्टकहरु सबै १s र तेस्रो अष्टक मा, पहिलो तीन बिट १s जो २२४ बराबर हुनेछ, बायाँ बाट शुरू गर्दा, जब तपाइँ एक अष्टक मा पहिलो ३ बिट जोड्नुहुन्छ यो २२४ सम्म जोडिन्छ। सबनेट मास्क र आईपी ठेगाना यसको बाइनरी ढाँचामा। र फेरी यदि हामी आईपी ठेगाना मा सबै अंकहरु लाई पार गर्दछौं कि सबनेट मास्क मा १s सँग लाइन , हामी देख्नेछौं कि आईपी ठेगाना मा, पहिलो २ अक्टेट्स र तेस्रो ओक्टेट मा पहिलो ३ बिट्स नेटवर्क हो। भाग र १३ बाँकी बिट्स होस्ट को लागी प्रयोग गरीन्छ। त्यसोभए अर्को प्रश्न हो, किन एक आईपी ठेगाना एक नेटवर्क र एक होस्ट भाग छ? किन यो मात्र एक होस्ट भाग
हुन सक्दैन प्रत्येक उपकरण एक आईपी ठेगाना असाइन गर्न को लागी? त्यसोभए किन यो एक नेटवर्क भाग छ? अब यसको कारण ब्यवस्थापन हो। यो सानो नेटवर्क वा उप सञ्जाल, जो subnetting को रूप मा जानिन्छ मा एक ठूलो नेटवर्क तल तोड्ने को लागी हो। तेसैले उदाहरण को लागी मानौं कि त्यहाँ कुनै सानो नेटवर्क थिएन। मानौं कि एक संगठन एक विशाल नेटवर्क मा कम्प्यूटर को एक ठूलो मात्रा छ । अब जब एक कम्प्यूटर अर्को कम्प्युटर संग कुरा गर्न चाहन्छ, यो जान्न को लागी कसरी र कहाँ त्यो कम्प्यूटर सम्म पुग्न को लागी आवश्यक छ । र यो एक प्रसारण को उपयोग गरेर यो गर्दछ। एक प्रसारण हो जब एक कम्प्यूटर एक नेटवर्क मा सबै कम्प्यूटरहरु लाई डाटा पठाउँछ त्यसैले यो पत्ता लगाउन र एक निश्चित कम्प्यूटर संग कुरा गर्न सक्छ। तेसैले उदाहरण को लागी मानौं कि यो कम्प्युटर यहाँ यो कम्प्यूटर संग यहाँ संग कुराकानी गर्न चाहान्थ्यो तेसैले अब के हुन्छ कि यो कम्प्यूटर यहाँ नेटवर्क मा एक प्रसारण बाहिर पठाउनेछ लक्षित कम्प्यूटर लाई सोध्नको लागी सोध्नको लागी यो यो संग कुराकानी गर्न सक्छ। तर यो
संग समस्या यो हो कि यस नेटवर्क मा हरेक कम्प्यूटर पनि प्रसारण प्राप्त हुनेछ किनकि ती सबै एउटै नेटवर्क मा छन्। तेसैले तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो ठूलो नेटवर्क मा हरेक कम्प्यूटर हर अर्को कम्प्युटर मा प्रसारण गरीरहेको थियो, मात्र संचार गर्न को लागी, यो अराजकता हुनेछ। यसले सञ्जाललाई ढिलो बनाउँछ र सम्भावित रूपमा प्रसारण ट्राफिकको जबरदस्त मात्राको कारणले यो रोक्न लाउँछ। र यो आगो को कारण पनि हुन सक्छ, राम्रो संग साँच्चै होइन तर, र यदि एक समस्या नेटवर्क मा हुन को लागी यो धेरै गाह्रो हुनेछ सpoint्केत गर्न को लागी किनभने नेटवर्क धेरै ठूलो छ। तेसैले यो नेटवर्क लाई रोक्न को लागी साना नेटवर्कहरु मा विभाजित गर्न को लागी आवश्यक छ र नेटवर्क भंग गरीएको छ र राउटर को उपयोग गरेर शारीरिक रूप बाट अलग गरीएको छ। र राउटरहरु को उपयोग गरेर यो अत्यधिक ट्राफिक को समस्या लाई कम गर्दछ किनकि प्रसारणहरु पहिले राउटरहरुमा जान सक्दैनन्। प्रसारण मात्र एक नेटवर्क भित्र रहन्छन् अब एक साना नेटवर्क को सट्टामा, यो नेटवर्क6subnetworks वा subnets मा टूटिएको छ।
त्यसोभए अब यदि यो कम्प्युटर यहाँ यो कम्प्यूटर संग यहाँ संवाद गर्न चाहानुहुन्छ, कम्प्यूटर एक प्रसारण पठाउनेछ कि मात्र यसको सबनेटवर्क मा कम्प्यूटर प्राप्त गर्न सक्दछ। तर जब देखि लक्षित कम्प्यूटर एक फरक सबनेटवर्क मा यहाँ छ, डाटा पूर्वनिर्धारित गेटवे मा पठाइनेछ, जो राउटर हो, र तब राउटर बुद्धिमानी संग गन्तव्य को लागी डाटा मार्ग हुनेछ। तेसैले यो किन आईपी ठेगानाहरु एक नेटवर्क भाग र एक होस्ट भाग छ, त्यसैले नेटवर्क तार्किक रूप मा साना नेटवर्कहरु मा भंग गर्न सकिन्छ जो subnetting को रूप मा जानिन्छ। हे साथीहरु मँ यहाँ मात्र ब्रेक गर्न चाहन्छु र तपाइँलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तपाइँ एक शुरुवात हुनुहुन्छ र तपाइँ नेटवर्किंग को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ , म अत्यधिक एक अडियो पुस्तक को सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ त्यो गर्न मा मद्दत गर्दछ। मँ तल वर्णन मा जोडिएको छ र तपाइँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई नि: शुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। मात्र अमेजन श्रव्य प्रीमियम प्लस को 30 दिन को नि: शुल्क परीक्षण को लागी साइन अप गरेर किताब प्राप्त गर्नुहोस्। तर पनी यदि तपाइँ 30 दिन को दौरान कुनै पनी समय मा तपाइँको श्रव्य सदस्यता रद्द गर्नुहुन्छ, अडियो पुस्तक अझै पनी तपाइँको लागी केहि तिर्नु बिना सधैं को लागी राख्न को लागी हो। तेसैले मात्र तल अमेजन सम्बद्ध लि click्क मा क्लिक गर्नुहोस्
र त्यसो गरेर तपाइँ मेरो च्यानल लाई समर्थन गर्नुहुनेछ किनकि मँ अझै पनी आयोग पाउँछु यदि तपाइँ रद्द गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। तेसैले एक पटक फेरी यो पूर्ण रूपमा मुक्त छ र धन्यवाद। तेसैले यहाँ एउटा उदाहरण गरौं , त्यसैले मानौं कि तपाइँ एक सानो व्यवसाय छ र यो तपाइँको आईपी ठेगाना र सबनेट मास्क हो अब मानौं कि तपाइँको सानो व्यवसाय मा १२ कम्प्यूटर को कुल छ र यी कम्प्यूटरहरु को सबै एक एकल नेटवर्क मा छन्। । र यी कम्प्युटरहरु विभिन्न रंगहरु बाट संकेत गरीएको विभागहरु संग सम्बन्धित छन् तर मानौं कि तपाइँ3अलग नेटवर्क मा कम्प्यूटरहरु लाई अलग गर्न चाहानुहुन्छ ताकि प्रत्येक विभाग अन्य विभाग को नेटवर्क यातायात देख्दैनन्। तेसैले तपाइँको व्यवसाय मा १ नेटवर्क को सट्टा , तपाइँ यसलाई ३ साना नेटवर्क मा तोड्न चाहानुहुन्छ। तेसैले सानो नेटवर्क मा तल यो नेटवर्क तोड्ने तरीका subnetting द्वारा हो। सबनेटि the ्ग पूर्वनिर्धारित सबनेट मास्क परिवर्तन गरी बिट्स को केहि होस्टहरु को लागी नामित गरीएको थियो र तिनीहरूलाई सबनेट बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। तेसैले यो सबनेट मास्क मा हामी
होस्ट भाग मा 0s को केहि 1s मा परिवर्तन गर्न जाँदैछौं ताकि हामी धेरै नेटवर्कहरु बनाउन सक्छौं। त्यसोभए यदि हामी सबनेट मास्क छोड्छौं जसरी यो हो, यसले हामीलाई १ नेटवर्क २५6 होस्टहरु संग दिनेछ। अब प्राविधिक रूप मा हामी2होस्टहरु घटाउनु पर्छ किनभने मानहरु कि सबै 1s र 0s क्रमशः प्रसारण र नेटवर्क ठेगाना को लागी आरक्षित छन्, त्यसैले हामी वास्तव मा 254 प्रयोग योग्य होस्टहरु छन्। तर हामी यो सबनेट मास्क परिवर्तन गर्न को लागी आवश्यक छ ताकि हामी3नेटवर्क को उत्पादन गर्न सक्छौं कि हामीलाई चाहिन्छ। उदाहरण को लागी उदाहरण को लागी होस्ट भाग बाट १ बिट उधारो। त्यसैले यहाँ हाम्रो नयाँ सबनेट मास्क छ। तेसैले अब चौथो अक्टेट १२ 128 हो किनभने जब तपाइँ एक ओक्टेट मा पहिलो बिट गणना यो १२als बराबर हुन्छ। तेसैले १ बिट उधारो यो नेटवर्क आधा मा विभाजित हुनेछ। तेसैले अब 254 होस्टहरु संग 1 नेटवर्क को सट्टा यो हामीलाई2नेटवर्क वा प्रत्येक सबनेट मा 126 होस्ट संग सबनेट दिनेछ। अब जाऔं
र होस्ट भाग बाट अर्को बिट उधारो राखौं। तेसैले अब हामी होस्ट भाग बाट २ बिट्स को कुल उधारो छौं । तेसैले यहाँ हाम्रो नयाँ सबनेट मास्क छ, र चौथो अक्टेट १ 192 २ छ। तेसैले २ बिट्स उधारो ले यो नेटवर्क लाई अझ बढि विभाजित गर्नेछ र अब यसले हामीलाई host२ मेजबानहरु संग ४ सबनेट दिनेछ। र फेरी होस्ट भाग बाट अर्को बिट उधारो। त्यसैले यहाँ हाम्रो नयाँ सबनेट मास्क छ। र3बिट्स उधारो यो नेटवर्क 30 होस्ट प्रत्येक संग 8 subnets मा नेटवर्क विभाजित हुनेछ। त्यसोभए यदि हामी यो नेटवर्क तोड्न जारी राख्छौं, यहाँ नतीजा छ यदि हामी4बिट्स उधारो जसले हामीलाई १ 14 होस्टहरु संग १ sub सबनेट दिनेछ। र यहाँ परिणाम हो यदि हामी ५ बिट्स उधारो जो हामीलाई ३२ मेजबान संग ३२ सबनेट दिनेछ। र यदि हामी6बिट्स उधारो यो हामीलाई प्रत्येक सबनेट मा2होस्ट संग 64 सबनेट दिनेछ । अब यो धेरै धेरै सीमा छ किनकि यदि हामी7बिट उधारो यो हामीलाई 128 सबनेट तर0प्रयोग योग्य होस्टहरु संग दिनेछ। तेसैले तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ
अधिक बिट्स सञ्जाल भाग होस्ट भाग बाट उधारो, सञ्जाल को मात्रा जुन प्रत्येक बिट संग दोगुना गर्न सकिन्छ। तर पनी नेटवर्क प्रति होस्ट को मात्रा प्रत्येक बिट संग आधा मा कटौती हुन्छ । तेसैले हाम्रो ब्यापारिक उदाहरण मा फिर्ता जाँदैछौं, यदि हामी यो नेटवर्क लाई ३ साना नेटवर्कहरु वा सबनेटहरुमा तोड्न चाहान्छौ भने हामीले होस्ट भाग बाट २ बिट उधारो लिनु पर्ने हुन्छ। तेसैले हामी मात्र ३ नेटवर्क को आवश्यकता छ, यो सबनेट मास्क हामीलाई कम्तीमा ४ नेटवर्क संग काम गर्न को लागी दिनेछ । तेसैले हाम्रो3सबनेट को लागी हाम्रो नयाँ कस्टम सबनेट मास्क 255.255.255.192 हुनेछ त्यसैले अब हाम्रो नेटवर्क3साना नेटवर्क वा सबनेट मा बिच्छेद गरीएको छ। अब मात्र स्पष्ट हुन को लागी, यो भिडियो सबनेट मास्क को बारे मा छ। यो सबनेटिंग मा एक पूरा पाठ होईन किनकि त्यहाँ एक सानो सबनेटिंग को लागी मैले तपाइँलाई यहाँ देखाएको भन्दा धेरै छ। मँ मात्र तपाइँलाई देखाउँदै छु कसरी सबनेट मास्क सबनेटिंग संग सम्बन्धित छ। अब आईपी ठेगाना र सबनेट मास्क5फरक वर्ग मा आउँछ।
जुन कक्षा A - E हुन्। तर यी कक्षाहरु को3व्यावसायिक उपयोग को लागी हो। तेसैले यहाँ आईपी ​​ठेगाना र पूर्वनिर्धारित सबनेट मास्क को एक चार्ट हो जुन वर्ग ए, बी, र सी छन् र तपाइँ आईपी ​​ठेगाना को पहिलो अक्टेट मा संख्या र डिफॉल्ट सबनेट मास्क बाट बताउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरु अब कुन वर्ग को हुन्। जब एक संगठन लाई नेटवर्कि needs को आवश्यकता छ उनीहरुलाई एक संगठन को आवश्यकता अनुसार आईपी ठेगाना वर्ग को आवश्यकता पर्दछ, जो उनीहरु कती मेजबानहरु मा आधारित छ। तेसैले यदि एक संगठन होस्टहरु को एक धेरै ठूलो रकम छ, उनीहरु एक वर्ग एक आईपी ठेगाना को आवश्यकता हुनेछ। एक वर्ग एक आईपी ठेगाना १ 16 मिलियन होस्ट सम्म उत्पादन गर्न सक्छ । तेसैले तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, एक पूर्वनिर्धारित कक्षा एक सबनेट मास्क मा, होस्ट भाग धेरै ठूलो हो3ओक्टेट होस्ट को लागी प्रयोग गरीन्छ किन यो धेरै उत्पादन गर्न सक्छ। एक संगठन को एक उदाहरण हो कि यो धेरै होस्टहरु को आवश्यकता पर्दछ एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्तै केहि हुनेछ , किनकि उनीहरु लाई आफ्ना सबै ग्राहकहरु लाई लाखौं आईपी ठेगानाहरु वितरण गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ।
एक वर्ग बी आईपी ठेगाना 65,000 होस्ट सम्म उत्पादन गर्न सक्छ। यो वर्ग मध्यम देखि ठूला संगठनहरुलाई दिईन्छ । र एक वर्ग सी आईपी ठेगाना 254 होस्ट उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा सी आईपी ठेगाना साना संगठनहरु र घरहरु मा होस्टहरु को एक धेरै छैन मा प्रयोग गरीन्छ। अब सबनेट मास्कहरु लाई CIDR र CIDR भनिने फरक तरीका बाट व्यक्त गर्न सकिन्छ वर्ग रहित अन्तर-डोमेन मार्ग को लागी, जो स्ल्याश नोटेशन को रूप मा पनि जानिन्छ। स्ल्याश नोटेशन एक सबनेट मास्क लेख्न को लागी एक छोटो तरीका हो। र यो यो एक अगाडि स्ल्याश लेख्न र तब एक नम्बर सबनेट मास्क मा १s गिनती गरेर गर्छ। तेसैले उदाहरण को लागी यदि तपाइँ यो जस्तै एक आईपी ठेगाना देख्नुहुन्छ, /24 को एक CIDR नोटेशन संग यसको मतलब छ कि सबनेट मास्क लम्बाई मा 24 बिट्स हो, यसको मतलब यो 24 1s छ। यदि CIDR संकेतन /२५ हो भने यसको मतलब सबनेट मास्क २५ बिट लम्बाइ हो
वा यदि यो /२ this हो यसको मतलब यो हो कि सबनेट मास्क २bबिट लम्बाइ हो। वा यदि साइडर नोटेशन /this हो यसको मतलब यो हो कि सबनेट मास्क लम्बाई माbबिट छ त्यसैले म सबनेट मास्क मा यो भिडियो हेर्न को लागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र तलको लिंक को उपयोग गरी अडियो पुस्तक नि: शुल्क पाउनुहोस्। र म तपाइँलाई अर्को भिडियोमा देख्नेछु।